Ọ bụla pụrụ ịgwa m otú nyefee ozi ederede site na iPhone na kọmputa? M na ụfọdụ dị mkpa ozi ederede na chọrọ nyefee ha ka ha na kọmputa m bụrụ na nke ihichapụ ha site na mberede.
Ọ bụ nnọọ dị mkpa nyefee ozi ederede site na iPhone na kọmputa maka ndabere. Ọ dịghị onye pụrụ ekwe nkwa na ya ma ọ bụ ya iPhone bụ 100% mma ezu jide niile ozi ederede. Ọ bụrụ na ị na-adọga anya n'ihi na a ụzọ ibudata ozi ederede site na iPhone na kọmputa, na ị na-nri ebe. Na-esonụ, mfe ụzọ ebufe iPhone ederede ozi na kọmputa.
1. Jikọọ iPhone
2. Nyefee iPhone ka PC
2.1 Nyefee Music
2.2 Nyefee Photos
Ma gụọ 2.3 Nyefee SMS
2.4 Nyefee Video
2.5 Nyefee oziolu
2.6 Nyefee Ndi ana-akpo e
3. ndabere iPhone
4. Control PC na iPhone
5. iPhone Nyefee Ngwá Ọrụ
Ihe Ị Mkpa Nyefee ozi ederede site na iPhone ka Computer
A Windows PC na iTunes arụnyere
Your iPhone na eriri USB Wondershare TunesGo
Wondershare TunesGo - Nyefee ozi ederede site na iPhone ka Computer
Nyefee ozi ederede site na iPhone ka Computer mfe na ngwa ngwa;
All iPhone exported ozi ederede mmasị faịlụ na-edebe, ka foto;
Zọpụta iPhone ozi ederede dị ka HTML, XML, TXT faịlụ;
Export iPhone ozi ederede dị ka printable faịlụ formats;
Ofụri Esịt-akwado iPhones, dị ka iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, iPhone 4s, iPhone 4, na ndị ọzọ >>
Ofụri Esịt dakọtara na ọhụrụ iOS 8, iOS 7, iOS 6 na iOS 5;
Nzọụkwụ maka Olee otú iji Detuo ozi ederede site na iPhone ka Computer
Nzọụkwụ 1 Download na wụnye Wondershare TunesGo
Download Wondershare TunesGo ikpe mbipute site na ịpị Download bọtịnụ n'okpuru. Wụnye na ẹkedori Wondershare TunesGo. Mgbe ahụ, jikọọ gị iPhone na gị Windows PC site eriri USB. Ọ bụrụ na ha na-ejikọrọ ịga nke ọma, ị pụrụ ịhụ gị iPhone na Wondershare TunesGo isi window ozugbo.
Nzọụkwụ 2 Export iPhone Text Ozi na kọmputa
Mbupụ ozi ederede site na iPhone na kọmputa, ị kwesịrị pịa SMS taabụ na sidebar. Họrọ chọrọ ozi ederede na ị chọrọ mbupụ n'akụkụ aka nri. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhọrọ niile, nne Mmetụta kwụsịrị rektangulu tupu Content. Mgbe ahụ, pịa Mbupụ na. Dabeere na gị mkpa, họrọ Export họrọ SMS na kọmputa ma ọ bụ Export niile SMS na kọmputa. Nke a ga-eme ka elu a faịlụ nchọgharị window. Chọta a ọnọdụ na kọmputa gị ịzọpụta exported ozi ederede. Mgbe ahụ, họrọ ịzọpụta ozi ederede na .xml format ma ọ bụ .txt usoro. Mgbe ahụ, a usoro amalite mbupụ ozi ederede.
Video Tutorial: Olee otú Download ozi ederede site na iPhone ka Computer
Otú nyefee listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes
Olee otú mbupụ Ndi ana-akpo si iPhone ka Gmail
Olee otú mbubata Gmail Ndi ana-akpo ka iPhone
Otú nyefee Music si iTunes ka iPhone
Otú nyefee Music si iPhone ka Mac
Olee otú ndabere iPhone ka Mac Mfe
Otú nyefee iPhone ngwa iTunes
Tansee iPhone Nyefee SMS Alternative nyefee SMS si iPhone ka Computer
Otú nyefee iPod Playlist ka iTunes
Olee otú a ga Apple Ahịa na New iPhone?
5 ụzọ ibudata music ka iPhone
2 Nzọụkwụ wepụ iPhone na nkwado ndabere na Windows 8
> Resource> iPhone> otú nyefee ozi ederede site na iPhone ka Computer